Sawirada fiidiyowga ee bilawga ah
Jawaabaha su'aalaha sawir-gacmeedka aasaasiga ah ee loogu talogalay milkiileyaasha cusub ee gawaarida cusub
Waa maxay 'Camcorder Camcorder'?
Kaamiradu waa qalab elektaroonik ah oo loogu talagalay in lagu qabto fiidiyowga oo dib loogu celin karo telefishanka ama kombiyuutarka.
Waa maxay cajaladda sawir-qaadaha lagu duubo?
Gawaarida ayaa duubi kara fiidiyo, cajalado, dareen adag, ama darawalada casriga ah. Maqaalkani wuxuu ku yaallaa qaababka "camcorder camats" ayaa ku siin kara hoos u dhaca noocyada kala duwan ee kamaradaha la heli karo.
Sidee video loo duubay kamarad ka duwan ka duwan duubista video iyada oo la adeegsanayo ficil video ah oo ku saabsan kamaradeyda dijital ah?
Kaamirooyinka digital-ka ah waxay badanaaba qori karaan fiidiyaha dhowr daqiiqadood ama daqiiqado. Fiidiyowga lagu duubo kamaradlahaaga dijital waa qadar ku habboon e-emaylka ama fiirsashada kombuyuutarka, laakiin sida caadiga ah ma fiicna inuu galo telefishankaaga. Gawaarida ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku duubto fiidiyeyaasha laga bilaabo 30 daqiiqo VHS-C iyo DVD-ga DVD-ga ah dhowr saacadood oo leh qalab adag iyo fiilo gelinta sawirada.
Miyaan ku dhigi karaa sawirro dhijitaal ah oo leh kamarad?
Haa. Sawirro badan oo farshaxan oo farabadan ayaa kaamirooyin dhisay. Haddii aad rabto inaad sawiradaada u isticmaashid kamarad dijital ah kadib waxaad rabi doontaa inaad dooratid kaamirada oo leh xalin sare. Sawirada 2 megapixel oo sawir leh ayaa kuu oggolaaneysa inaad daabacdo 4x6 sawir, 5 megapixel kamera ayaa kuu oggolaaneysa inaad daabacdo sawirada illaa 11x14. Fiiri maqaalkan ku saabsan Cameroon ku saabsan si aad u ogaato waxa aad ka filan karto malyuun kasta oo kala duwan.
Sideen u daawadaa fiidiyowyadeyda?
Dhamaan sawirada ayaa kuu oggolaanaya inaad ku daawato fiidiyowgaaga ku soo celi sawirka. Tuubooyinka VHS-C ayaa lagu dhejin karaa qalab waxayna ku ciyaaraan VCR. Mini-DVD waxaa lagu dhejin karaa DVD-ga dhaqameed ee loogu talagalay in lagu ciyaaro. Hi8, Hard Disk, iyo Flash camaajiga ku salaysan ayaa kaa doonaya inaad ku xirto kamaradadaada telefishankaaga ama fiidiyoowgagaaga kombiyutarkaaga adoo isticmaalaya barnaamijka fiidiyowga fiidiyow si aad u daawato.
Sideen ku ogaan karaa nooca camcida ee aniga ii sax ah?
Awoodda saxda ah ee adiga kugu xiran waxay ku xiran tahay waxa aad qorsheyneyso isticmaalka. Maqaalkani wuxuu leeyahay dhowr su'aalood oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad is-waydiiso ka hor intaadan bilaabin raadinta sawir-qaadahaaga. Marka aad go'aansato waxa aad qorsheynaysid isticmaalka kamaradadaada waxaad ka heli kartaa talooyin ku saabsan qaababka aad u raadinayso iyo qaar ka mid ah talooyinka soo-jeedinta "Find The Camcorder Right For You"
Dhibaatooyinka La-qabsashada Baabuurka Al Farbade
Talooyin Sawireed ee Jilaalka Qaboobaha iyo Tiknoolajiyada
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Kaarka Maqalka
Tilmaamaha Wareegyada Wi-Fi iyo Sawirada Sawirada
Sidee loo Dhawaaqaa Diidmada Gawaarida
Rabitaanka Dhibaatooyinka Feejignaanta leh DSLR
Sidee baan u Xaqiijinayaa Marka Ilmahaygu Isticmaalayo Bateriga?
Dib-u-eegid: Revolution Civilization for iPad
Isticmaalka Apple Diagnostics si loo Xalliyo Macluumaadkaaga Mackodka Mac
5 Ciyaaraha Ciyaaraha Nintendo waa inay sameeyaan Pokemon GO kadib
Pioneer waxay ku dareysaa Elite BDP-85FD / BDP-88FD Ciyaartoyda Disc Blu-ray
Sidee baan u horumarin karaa barnaamijyada qalabka moobiilka?
Sida loo Dhigo iPod
Noocyada aad ku raadineysid markaad dooratid telefan cusub oo cusub
10ka ugu wanaagsan ee feylaha FM-ga ee loogu talagalay baabuurkaaga sannadka 2018
Faylka Wadaagista OS X 10.5 - La wadaag Macalooyinka Macluumaadka ee Windows Vista
Sida Loo Helo Saaxiibada loo Snapchat by Scanning Snapcodes ay
Maxay Google Cardboard muhiim u tahay mustaqbalka VR?
Saameynta ganacsiga ee Mobility ee 2016
HTTP Xaaladda Xaaladaha Cilladda
Maxaad U Baahan Tahay Intaadan Weydiisan Inaad Ka Horto Guriga
Sida loo abuuro Text Editable in Paint.NET
Sidee Looga Xakameyn Doonyahaaga
Sidee loo ciyaari karaa iTunes Songs ee Winamp
Qeybinta Maaraynta Macluumaadka